China Fonenana Backlit Kitchen Thermometer Miaraka amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy Multi Function | EMATE
Fitaovam-pandrefesana an-dakozia backlit an-dakozia miaraka amina fampiasa maro
Fantatray fa mikarakara ny mpanjifanao tahaka ny fikarakaranao anao izahay, ka izany no anomezanay anao ny fitaovana thermomera an-dakozia namboarina tsara indrindra manompo ny filan'ny mpanjifanao rehetra mety hoeritreretinao na tsy eritreretinao. Azon'izy ireo ampiasaina izany mba hahitana ny maripanan'ny sakafo na ny mpanokatra na ny fitarihan'ny mari-pana. Ny bokotra fanerena nitarina eo anoloana dia manamora ny paiso ny fahazoana ireo fiasa rehetra hanompoana ny filan'ny mpanjifanao. Ny tantana ergonomika dia mety hahatsapa fa mihazona ny tanany izy ireo. Ny torolàlana momba ny mari-pana voasoratra tsara dia ny endrika mandanjalanja indrindra izay manome ny tsiambaratelon'ny mpanjifanao amin'ny fampisehoana mora foana ny sakafo gourmet. Tian'izy ireo ianao noho ity famolavolana ity! Amin'ny jiro volomboasary volomboasary dia afaka mamaky azy io amin'ny alim-pitobiana maizina na amin'ny andro milentika mamirapiratra ny mpanjifanao. Ny fenitra avo lenta indrindra mandritra ny famokarana, fa azo atao koa ny manamboatra azy indray. Betsaka ny safidy hitahiry an'ity thermometatra lavalava ity araka ny tokony ho izy ka tsy ho amin'ny fomban'ny mpampiasa mandamina anao indrindra.
-Fandinihana vy tsy misy fangarony (180 °)
-Seho amin'ny toetr'andro amin'ny ℃ / ℉
-Ny calibration mari-pana mahazatra
-Mahazava jiro aoriana
-Ny firaketana Max / Min ho an'ny mari-pana
-Toro lalana momba ny mari-pana
-Handy opérence handy
-Auto-hanidy ny asany
Bokotra -Push: ON / OFF, HOLD, UP / ℃ / ℉, Down / MEM
-IP67 nomanina tantera-drano
-Ny tranga fiarovana ABS
-Mihantona rindrina / manantona andriamby
-50℃ ~300(-58℉ ~572)
Fikarohana vy tsy misy fangarony sakafo
1 CR2032 (tafiditra)
38 x 16 x 304MG
Package dia misy:
Sakafo Thermometer x 1pc
Thermometer Sakafo Foldaway Miaraka amin'ny Timer sy ny Temper ...